किन हुन्छन् महिलाहरु यौन जिवनमा असन्तुुष्ट ? – खुल्लापाना
एजेन्सी, १७ माघ ।
वैवाहिक सम्बन्धमा यौन सम्बन्धको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यौन मानिसको आधारभुत आवश्यकता भित्र पर्दछन् ।
यती हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा महिलाहरू आफ्नो यौन जीवनमा त्यति सन्तुष्ट भएका पाइँदैन । महिलाहरू यस विषयमा खुलेर कुराकानी गर्न चाहँदैनन् तर उनीहरू भित्रैदेखि निराश भइरहेका हुन्छन् ।
महिलाहरू आफ्नो यौन जीवनमा असन्तुष्ट हुनुका केही कारणहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
१. प्रेम र सम्मानः महिलाहरू सम्बन्धमा तपाईंको प्रेम, स्नेह र सम्मानको महसुस गर्दैनन् भने उनीहरूको लगाव कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शारीरिक घनिष्ठता उनीहरूले सोच्नसमेत सक्दैनन् । शारीरिक सम्बन्धमा सामेल भए पनि उनीहरूले त्यसमा विल्कुलै मनोरञ्जन गर्न सक्दैनन् ।
२. अती जिम्मेवारीः धेरैजसो महिलाहरूले कार्यालयको कामका साथै घरको काम र पारिवारिक जिम्मेवारीसमेत निभाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा थकान र तनाव महसुस गर्छन् । यो अवस्थामा पनि उनीहरू शारीरिक सम्बन्धमा रुचि देखाउँदैनन् ।
३.दिक्दारी र तनावः यौन जीवनलाई दिक्दारी मान्नु र सम्बन्धमा प्रेम र कुनै प्रकारको ‘इमोसन’को अनुभव नगर्दा पनि महिलाहरू यौन जीवनमा टाढा हुने गर्छन् । उनीहरू आफ्नो पार्टनरको शारीरिक सन्तुष्टिका लागि यौन सम्बन्धमा सामेल भए पनि त्यसको तत्कालै अनुभव पाउन सकिन्छ । यस्तो भएमा महिलाले शारीरिक सम्बन्धमा दूरी बनाउन थाल्छन् ।
४. लुक्सः महिलाहरू आफ्नो ‘लुक्स’लाई लिएर धेरै संवेदनशील हुन्छन् । बढ्दो तौल, पार्टनरको आकर्षण र प्रेम नदर्शाउने गर्दा पनि उनीहरूले यौन जीवनमा आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउँछन् । यस्तो अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध कायम भएमा पनि उनीहरूले सहजता महसुस गर्दैनन् ।
५. संकोचः धेरैजसो महिलाले यौन सम्बन्धमा आफूलाई कुन कुरा मनपर्छ र कुन कुरा मनपर्दैन भनेर बताउन चाहँदैनन् । यो कुराले उनीहरूलाई असहजता महसुस हुँदै जान्छ र तनावको कारक बन्न सक्छ ।
Tags: खुल्लापानायौन सम्बन्धवैवाहिक सम्बन्ध
राप्रपा नगर प्रमुख सहित सयौं नेता कार्यकर्ता काँग्रेस प्रवेश(फोटो कथा)